सोमबार नेप्से ३२ अंकले ओरालो, इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बृद्धि
गोठालो खबर -१ २०७७ फागुन १०, साेमबार,०४:०८:PM
काठमाडौं, १० फागुन । आज नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको छ । १.२४ प्रतिशत अर्थात ३२.६७ अंकले घटेर २६०७. ६७ विन्दुमा रोकिएको हो । आइतबार ३.३६ अंकले बढेर २६४०.३४ विन्दुमा पुगेको थियो । सबैभन्दा धेरै सोमबार १० प्रतिशतले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैकको शेयर मूल्य बढेको छ ।
साताको कारोबारको दोस्रो दिन नेप्से सूचक अनुसार २०७ कम्पनीका ७८ हजार ८ सय ५८ पटक कारोबार भएर ८ अर्ब ४० करोड ६३ लाख १० हजार ६७१ रुपैयाँ बराबरको २ करोड १७ लाख १४ हजार ४५२ कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएको छ ।
त्यस्तै, सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि १.९२ प्रतिशत अर्थात ९.२२ अंकले घटेर ४७०. ३६ कायम भएको छ । आज हाइड्रोपावर उपसमूह र अन्य समूहको बाहेक १० उपसमूहको परिसूचक घटेको छ । हाइड्रोपावरको २.२६ प्रतिशत र अन्य समूहको १.२९ प्रतिशतले परिसूचक घटेको हो ।
सोमबार सबैभन्दा धेरै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैकको १० प्रतिशत अर्थात प्रतिशेयर ६० रुपैयाँले बढेर ६६० रुपैयाँ कायम भएको छ । बैंकको आज ३२ करोड १२ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएको छ । त्यस्तै, एनआईसी एसिया बैंकको सबैभन्दा धेरै ३८ करोड २४ लाख भन्दा धेरैको शेयर कारोबार भएको छ ।